Swarmify: Antony efatra tsy tokony hampiasa sary an-tsokosoko ao amin'ny tranokalan'ny orinasanao | Martech Zone
Raha manana horonan-tsary matihanina nandanianao vola dolara an'arivony ny orinasanao dia tokony hamoaka tanteraka ireo sary ao amin'ny YouTube ianao hanararaotanao ny valin'ny karoka YouTube…. alao antoka fotsiny fa ianao manatsara ny YouTube anao horonan-tsary rehefa manao izany. Izany dia nilaza fa tsy tokony apetrakao ao amin'ny tranonkalanao ny horonantsary YouTube… noho ny antony vitsivitsy:
YouTube dia manara-maso ny fampiasana ireo horonantsary ireo ho dokambarotra kendrena. Fa maninona ianao no te hizara ny tanjon'ny mpitsidika anao amin'ny Google hahafahan'izy ireo manosika dokam-barotra ho an'ireo mpifaninana aminao?
Raha tsy manadino ianao dia mety hiala horonan-tsary mifandraika amin'ireo mpifaninana aminao ao amin'ny mpilalao YouTube anao! Alao an-tsaina ny fitsidihanao ny tranokalanao, hijerena ny horonan-tsarinao, avy eo aseho ho toy ny safidy hafa mifandraika ny lahatsarin'ilay mpifaninana aminao. Ouh!
Mino izany na tsia, ny tena izy YouTube somary miadana ary matetika ny horonan-tsary dia tsy manomboka mihitsy indraindray satria buffering ilay video. Hey… afaka izany, sa tsy izany? Eny… tsy ho an'ny orinasa manandrana manidy ny mpanjifa fa tsy. Tena misy vidiny haingam-pandeha amin'ny Internet.
Ny mpilalao horonan-tsary YouTube dia tsy dia izany customizable… Jereo ity horonantsary eto ambany ity izay ahafahako misafidy vitsivitsy… mijery ao amin'ny YouTube, kitiho ny rohy hanokafana amin'ny YouTube, hijerena Taty aoriana ao amin'ny YouTube, Share, na tsindrio ny lalao. Ny marika rehetra dia ho an'ny YouTube fa tsy ny marikao. Maninona no tsy mpilalao tsy mahasarika sy miasa fotsiny?
Azoko atao angamba ny manoro hevitra anao mba tsy hampiantrano horonantsary amin'ny tranokalanao ihany koa. Ny mpampiantrano tranonkala mahazatra anao dia tsy manana fotodrafitrasa hanakanana mpitsidika an'arivony. Raha ny tena izy dia misy ny vintana mety hamakivakianao ny tokonam-baravarana fampidinana ary hahazo vola bebe kokoa ianao. Tena mila mpampiantrano horonantsary… fa tsy YouTube.
Andraso segondra, hoy ianao… Doug… ianao foana ampidiro ao amin'ny tranokalanao ny horonantsary YouTube. Ry havana, famoahana ity… tsy tranokala fandraharahana. Tena tiako ny mampiditra horonantsary avy amin'ny YouTube mba hahafahan'ny mpamorona mahita fomba fijery fanampiny sy fotoana ahafahan'ny olona mahita sy misoratra anarana amin'izy ireo. Rehefa manana horonan-tsary matihanina vita ho an'ny orinasako aho dia hampiantrano azy ireo tanteraka Swarmify.
Mazava ho azy fa misy faningana hafa… YouTuber ianao!
Swarmify SmartVideo: fampiantranoana horonantsary haingana
Swarmify dia manolotra vahaolana fampiantranoana video matanjaka sy haingana ho an'ny tranonkalanao. Ity misy horonantsary topimaso:
Swarmify manolotra fiasa tsy mampino:
CDN - Manana eran-tany izy ireo fifandraisana an-tariby (CDN), midika izany fa kely dia kely ny latency eo anelanelan'ny olona mangataka ilay horonan-tsary sy ny toerana anaovana azy.
Playback tsy misy buffer - SmartVideo dia mampiasa ny vahaolana fandefasana patanty miandry an'i Swarmify, mampihena be ny 8x amin'ny fivarotana.
Fandefasana horonantsary fanatsarana mitohy - Mandritra ny filalaovana indray dia manara-maso tsy tapaka ny zavatra niainan'ny mpampiasa tsirairay ny SmartVideo ary manakana ny tsy fahombiazany alohan'ny hitrangan'izany.
Fitaovana Encoding - Ireo mpitsidika dia mahazo tombony amin'ny alàlan'ny lahatsoratr'izy ireo mba hanomezana traikefa tsara indrindra. Tsy misy ahiahy ary havaozina ho azy ho an'ny fitaovana vaovao.
Mpilalao madio tsy misy fanelingelenana - Manaova varotra bebe kokoa, ary ahena ny tahan'ny fihenam-bidy amin'ny alàlan'ny fihazonana ireo mpitsidika hifantoka amin'ny marikao. Ny sary goavambe sy horonan-tsary mifandraika dia natao hanala ny mpanjifanao.
WordPress Plugin - Tsy mila mikorontana amin'ny script sy embeds, SmartVideo dia manana plugin hampiarina anao sy handehananao mora foana.
Pricing - Tsy tokony hosaziana ianao amin'ny fanompoana atiny avo lenta amin'ny tranokalanao. Izany no mahatonga ny faktiora SmartVideo tsy miorina amin'ny bandwidth, fa ny sary fotsiny no jerena.
Ity misy fampitahana mifanila ny hafainganam-pandeha:
Tafiditra ao anaty horonantsary YouTube
Raha tsy ampy izany, SmartVideo dia maka ny horonan-tsarinao avy ao amin'ny YouTube, mametaka azy ireo ary mitahiry azy ireo. Aorian'izany dia soloina tanteraka ny mpilalao YouTube ary ny video-nao dia hampiantrano amin'ny tambajotram-panaterana manerantany ary atolotra amin'ny alàlan'ny haitao haingam-pandeha haingam-pandeha.
Manomboha amin'ny Swarmify
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Swarmify SmartVideo.
Tags: bufferingfampiantranoana horonantsary fandraharahanafampiantranoana horonantsary orinasafampiantranoana horonantsary hainganasmartvideomirohondrohonahoronan-tsary cdnVideo encodingmpampiantrano horonantsaryvideo hostingplugin WordPressYouTube mpisolo toerana
Ahoana no fiasan'ny dokam-barotra? Inona no mahatonga ny olona hividy?